‘खुंखार भिलेन’ प्रकाश राजलाई नजिकबाट चिन्नुहोस् ! « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
‘खुंखार भिलेन’ प्रकाश राजलाई नजिकबाट चिन्नुहोस् !
साउथ र बलिउड फिल्ममा सबैभन्दा डिमाण्डेड अभिनेता हुन्, प्रकाश राज । बलिउडमा नेगेटिभ भूमिकाका लागि आजपनि निर्देशकको पहिलो रोजाईमा उनी नै हुने गर्दछन् । उनको जन्म वर्ष १९६५ मार्च २६ मा बेङलोरमा भएको थियो । प्रकाशले बालचन्दरको ‘डिउट’ बाट फिल्मी करिअर सुरु गरेका थिए ।
उनको वास्तविक नाम भने प्रकाश राय हो । बालाचन्दरको सल्लाहमा उनले आफ्नो सरनेम परिवर्तन गरेका थिए । उनले अहिलेसम्म पाँच पटक नेशनल अवार्ड जितिसकेका छन् । प्रकाशले बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टिङ, बेस्ट सपोर्टिङ एक्टर, स्पेशल ज्यूरी जस्ता अलग-अलग विधामा अवार्ड उचालेका छन् । बलिउडमा उनले ‘सिंघम’, ‘दबंग’, ‘वान्टेड’ र ‘जंजीर’ जस्ता फिल्ममा नेगेटिभ भूमिका निर्वाहा गरेर मुख्य भिलेनको धमिलो हुँदै गएको छवि बचाउन उल्लेखनीय योगदान गरेका छन् ।
एक्टरसँगै प्रकाश एक डाइरेक्टर पनि हुन् । उनले तमिल, तेलुगु र कन्नडमा कयौं फिल्म निर्देशन गरेका छन् । फिल्मका अलावा थिएटरका पनि प्रेमी हुन्, उनी । उनले २ हजार बढि नुक्कड नाटकमा काम गरिसकेका छन् । दमदार एक्टिङसँगै प्रकाश राज कहिले काहीँ आफ्नो रिसका कारण पनि चर्चामा रहने गरेका छन् । यही कारण ६ पटक उनलाई तेलुगु इन्डस्ट्रीका प्रोड्यूसर्सले ब्यान गरिसकेका छन् ।
उनी पछिल्लो केही समयदेखि मोदी सरकार र भाजपाको राजनीतिको कडा विरोद्ध गर्दै आइरहेका छन् । यसकारण आफूले बलिउडमा काम पाउन छाडेको उनले केही समय अगाडि एक अन्तर्वार्तामा बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘साउथ फिल्म् इन्डस्ट्रीमा कुनै समस्या छैन, तर जबदेखि मैले मोदी सरकारको विरोद्ध बोल्न थालेँ तबदेखि हिन्दी फिल्म इन्डस्ट्रीबाट अफर आउन बन्द भएको छ ।’